Philips DC390 Docking Station for iPod/iPhone/iPad - Black | Buy online | SHOP.COM.MM
Philips DC390 Docking Station for iPod/iPhone/iPad - Black
Output power (RMS) 4W PMPO
Philips ရဲ့ Docking stationလေးကို ဘယ်လိုသဘောကျမှန်းမသိပါဘူး။ ဖုန်းအားသွင်းရင်း သီချင်းလည်းနားထောင်လို့ရတယ်။ အားပြည့်တာလည်းအရမ်းမြန်ပါတယ်။ Read more Hide
This Philips product has beautiful design, pairs effortlessly via bluetooth with any device whether ipad or android, and most importantly sound is amazing! Read more Hide
ဈေးနည်းနည်းကြီးတယ်ထင်ရပေမဲ့ တကယ်အသုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါ။ ချစ်နှင်းကြိုက်တာက device နှစ်ခုလုံးကို တစ်ခါတည်းအားသွင်းလို့ရတာလေ။ အဲ့တော့အချိန်ကုန်သက်သာတယ်။ နှိုးစက်လိုလည်း သုံးလို့ရသေးတယ်။ အသံကလည်းအကျယ်ကြီးပဲ။ Philips ကတော့ Good ပဲ။ Read more Hide
Philips ရဲ့ Docking Station က အားသွင်းရင်း သီချင်းနားထောင်နိုင်တာကြောင့် သုံးရတာအရမ်းအဆင်ပြေတယ်။ Read more Hide
DC390 Docking Station for iPod/iPhone/iPad - ?????????
Specifications of DC390 Docking Station for iPod/iPhone/iPad - Black